R940 Crawler Excavator Site Libherr | ACE igwe
R940 Crawler Excavator Site Libherr
France R & D na ụlọ ọrụ mmepụta ihe mechara igwe ọhụụ -R940 Crawler Excavator nke bụ ngwaahịa kachasị ọhụrụ maka usoro nke R 944C
N'ịbụ ndị bara uru site na ahụmịhe bara ụba sitere na Libherr, igwe ọhụrụ ahụ nwere ezigbo ike ịrụ ọrụ, nke ahụ nwere ike iwulite ụkpụrụ ọhụrụ maka ọpụpụ na-abịanụ. N'ihi na igwe a nwere ike ime karịa egwuregwu na gburugburu ebe obibi. Na igwe ahụ na-agbakwunye oghere nke R950 na usoro R960 nwere ike ịkwado maka ebe mgbada.
Igwe igwe ohuru a maka EU-5 emission. Na ọnụego mmepụta nwere ike iru 200KW, n'otu oge ahụ nwere DOC, SCR sytem, ​​DPF ma wepu valvụ EGR. Ngwaọrụ niile a nwere ike ime nchekwa mmanụ ma chebe injin ya. E wezụga nke ahụ, ọ nwere ike ịnye nsụgharị Tier 4 Final. N'ikpeazụ, Libherr na-enye injin kwekọrọ na ya maka ụfọdụ ahịa pụrụ iche.
Lee otu akụkụ dị mkpa LDC, Site na itinye nchekwa akụkụ nchekwa, Ọkwọ ụgbọ ala nwere ike ịma ọnọdụ igwe na ebe dozer, ọ bụrụ na enwere ihe egwu ọ bụla LDC ga-enweta ozi ahụ ka onye ọkwọ ụgbọ ahụ mara.
N'otu oge ahụ, ọkwọ ụgbọ ala na-eme mgbanwe dị ka chassis Hydraulic, na mbadamba mbughari Counterweight. Ọkwọ ụgbọ ala nwekwara ike iji Compressor Ikuku mee ikuku ọhụrụ n'ime ụlọ ahụ.
Igwe ọhụrụ a nwere ike iwugharị ọkọlọtọ maka Demolition Excavator.